श्रीमान - श्रीमती -
साहित्य | Wednesday, 19th August 2015, 05:45 PM |
श्रीमान:श्रीमती / एक दिन श्रीमान घर आउँदा निकै अबेर भएछ । अनी घर आएर ढोका बाट भित्र छिर्न न पाउदै श्रीमतीले भनिछन ।
कहाँ जानु भएको थियो ? मैले हजुरको अफिसमा पनि फोन गरी सोधे । हजुर त आज अफिस पनि जानु भएन रे । के हो यस्तो चाला ? अनि यो हातमा भएको झोला कस्तो गनाई रहेको छ । के हो यो ?
म.. म... म आमालाई लिन गएको थिए । आमा अब यही बस्नु हुन्छ । यो झोला आमाको हो । यस्मा आमाको कपडाहरु छ ।
श्रीमती (रिसले जुर्मुराउदै) :
दिमाग त सही छ हजुरको ? किन आमालाई यहाँ ल्याउन पर्‍यो र ? हजुर कै दाजु भाइले हेरी हाल्छन नि, तेसै माथी हजुरको तलब ले के नै हुन्छ र ? छोरा छोरी लाई पढाउन त गाह्रो भैरहेको अवस्थामा अब यि बुढिलाई कसरी पाल्ने ? सक्दिन म त पाल्न ।
तेस्तो न भन, आमाको सेवा गर्ने त हाम्रो धर्म र कर्तब्य हो नि ।
आफै बाच्न धौ धौ परेको बेलामा म त सक्दिन । यती भन्दै श्रीमतीले श्रीमानको हातबाट झोला खोसेर बाहिर लगेर फालिदिन्छे । अनि एसो बाहिर हेर्दा त आफ्नै आमा पो रहेछ । अनि हत्त न पत्त झोला उठाउदै आमालाई लिएर भित्र आउछे र श्रीमान लाई भन्छे...
...अगिनै भन्न पर्दैन ? मेरो आमा हो भनेर ।
तिमीले मलाई बोल्ने मौका का दियौ र ? एकोहोरो आफु मात्र बोलेको बोलै । तिम्रो दाई र भाउजुले तिम्रो आमालाई घर बाट निकाली दिएका रहेछन । अनि मैले थाहा पाएर म अफिस न गै कन आमालाई लिन गएको थिए ।
कती जाती र बुझ्ने हुनु हुन्छ है मेरो प्यारो बुढो । (यती भन्दै उ आमालाई लिएर भित्र कोठामा जान्छे)
(एस्तै छ सन्सार, भनिन्छ घर बनाउनु र भत्काउनुमा आईमाइको ठुलो हात हुन्छ । जुन घरमा नारी समझदार, दयालु र बुद्धिमानी हुन्छे । त्यो घर आफैमा स्वोर्ग हो । सबैले बुझ्न जरुरी छ)
- ज्योतिष आनन्द सुबेदी
किड्नीमा भएको पत्थरीबाट हप्ता दिनमै छुटकारा पाउन सकिने प्राकृतिक उपचार
ग्यास्टिक, कसरी हुन्छ र बच्न के गर्ने?
शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन -प्रकाश श्रेष्ठ
विद्यालय शिक्षाको पवित्र मन्दिर हो । यही पवित्र मन्दिरबाट नै कलिला बालबालिकाहरुले भविष्यका सुन्दर सपनाहरुलाई...
गजल: यसै यसै बहकिन्छु
गजल: यसै यसै बहकिन्छु, तिमि नजिक हुँदा। म आफैलाई बिर्सिन्छु, तिमि नजिक हुँदा।। यो जुन मेरै लाग्छ, यो आकाश मेरै...
अमेरिका,६ फेब्रुवरी । नेपालको विकट जिल्ला सङ्खुवासभाको चैनपुरमा जन्मि हवाइट हाउसमा ओबामाको सल्लाहाकार सम्म...
भूकम्प घर ढलेन मान्छे मरेन यो के को भूकम्प ? डलर प्रेमीहरूले डलर थाप्न पाएनन् मन्त्रीहरूले कम्बल सोहर्न...
Elixir for Kids ’’किशोर किशोरीलाई अमृत”- सबैले एक पटक पढ्नु पर्ने पुस्तक
कुनै पदार्थ सेवन गर्नाले आफू वा सार्वजनिक रूपमा अरूलाई पनि असर गर्दछ भने त्यसलाई लागु पदार्थ दुरुपयोगको रूपमा...
एकादेशमा -अर्जुन तिमल्सिना
कथा-एकादेशमा अलि पर देखिएको पल्लवी द्रुमको दृश्य हेर्दै घरै छेउको तृणमा बसेर ठुलोकान्छो स्कुलमा सरले दिएको...
देशको संदेश प्रारम्भ उत्थान विकाशकाल साहित्यका मापन यन्त्र हाल एले उदायो नव जन्यवाद विवाद...
क्षितिजको बार्दलिहरुबाट निस्तो निम्तोलाई स्वागत गर्दै एउटा कल्पनाको खोक्रो आभासमा आफूलाई रमाएर...
चिया गफ की ? यथार्थ ?
-अर्जुन तिमल्सिना परेली खुला भएपनि कहिलेकाँही दृष्टि बन्द हुदो रहेछ । भारतीय नाकाबन्दिले गर्दा महङ्गाईको शिखर,...